Solar PV Array စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများအတွက်တရုတ် 1000V 32A ရေစိုခံ DC Isolator Switch SISO | ထင်း
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောလျှပ်ကာဗို့: DC က 1000V, 1500V
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအပူစီး: 16A, 25A, 32A
DC တိုင်များ 2P သို့မဟုတ် 4P
ဆက်သွယ်မှု MC4 Solar Connectors နှင့်အတူ
IP66 DC Isolator Switch ၏ကောင်းကျိုးများ
လွယ်ကူသောတပ်ဆင်မှုအတွက် 2. DIN ရထားလမ်း mounting
၃။ အလေးချိန် ၈ ကြိမ်အထိတက်သည်။ မော်တာအထီးကျန်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
5. ဘက်စုံအကွာအဝေး, 16 မှ 32A မော်ဒယ်များ
6. မြင့်မားသောရေစိုခံကာကွယ်မှု IP 66 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
၁၂.၅ မီလီမီတာထိတွေ့နိုင်သောလေကွာဟမှုနှင့်အမြင့် ၇ ှိသောစွမ်းရည်
IP66 DC Isolator Switch ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
ပုံစံအမည် FDIS-16 FDIS-25 FDIS-32
IEC60947-3 အရအောက်ပါ CNC
insulator တွင်လည်းဗို့အားသတ်မှတ်သည် DC က 1000V / 1500
လက်ရှိအပူနှုန်း 16A 25A 32A
တိုတောင်းသော circuit ကိုအောင်စွမ်းရည်အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် 1300A 1500A 1700A
တိုတောင်းသော circuit ကိုလက်ရှိ Icc အဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည် 5000A
အများဆုံး fuse သတ်မှတ်ချက်များ gL (gG) 40A 63A 80A
DC ကိုထမ်းဘိုး2သို့မဟုတ် 4
Operating အပူချိန် -25 ℃ ~ + 70 ℃
IP66 DC Solar Isolator Switch ၏ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက်
ရှေ့သို့ 1000V နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအကာအကွယ်ပေးရေးကိရိယာ Arrester DC SPD မြင့်တက်လာသည်
နောက်တစ်ခု: AC အသေးသေး Circuit Breaker 63 Amp 1P 2P 3P 4P AC MCB
အထီးကျန် switch ကို
SISO switch သည်
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးအထီးကျန် switch ကို